आइतबार जुलाई 11, 2021 |
आइतबार जुलाई 11, 2021
विषय — विषय- धर्मविधि
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: 1 पत्रुस5: 2
“"जुन ती मानिसहरुको तिमीहरु जिम्मावारी छौ, तिनीहरुको हेरचाह गर्नु भनी म निवेदन गर्छु। तिनीहरु परमेश्वरका बथान हुन्। ती मानिसहरुको समूहलाई हेरचाह गरिदेऊ तिमी चाहान्छौ भने, तर वाध्यतामा होइन। यसो गर किनभने तिमीहरु सेवा गर्नमा खुशी छौ, यसो होइन कि तिमीहरु पैसाका निम्ति लोभी छौ।"”
उत्तरदायी पढाइ: याकूब 1 : 21-27
26 कोही मानिस आफूलाई धार्मिक सम्झन सक्छ। तर यदि त्यो व्यक्तिले होशियारसित बोल्दैन भने उसले स्वयंलाई मूर्ख तुल्याइरहेको हुन्छ। उसको धर्म कुनै काममा आउँदैन।
1. मत्ती9: 10-13
12 फरिसीहरूले भन्दै गरेको कुरा येशूको सुन्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, स्वस्थ मानिसहरूलाई वैद्यको आवश्यकता पर्दैन। जो रोगी छ उसैलाई वैद्यको आवश्यकता पर्दछ।
13 म तिमीहरूलाई एउटा कुरो भन्नेछु। जाऊ अनि यसको अर्थ के हो सिक ‘म पशुको बलिदान चाहन्न। म मानिसहरूमा दया चाहन्छु। म यहाँ धार्मिक मानिसहरूलाई भेट्न आएको होइन, ती पापीहरूलाई भेट्न आएको हुँ।
2. मत्ती 12 : 1-8, 10-14
1 त्योसमय, येशू विश्रामको दिनमा अन्नका खेतहरूबाट जानुहुँदै थियो, येशूका चेलाहरू पनि उहाँसँगै थिए। तिनीहरू भोकाएका थिए। ती चेलाहरूले अन्नका बाला टिप्दै खान लागे।
2 फसिहीहरूले यो देखेर। तिनीहरूले येशूलाई भने, हेर्नुहोस्! तपाईंको चेलाहरू विश्रामको दिनमा गर्नु निषेध गरिएका कुरा गर्दैछन्।
3 उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, दाऊदले, आफै र आफूसँगका मानिसहरू भोकाउँदा के गरेथे, के तिमीहरूले पढेका छैनौ?
6 म तिमीहरूलाई भन्दछु, यहाँ मन्दिर भन्दा ठूलो’ केही छ।
8 मानिसको पुत्र विश्राम दिनको पनि प्रभु हो।
10 उहाँले सभाघरमा एउटा सुकेर चाउरिएको हात भएको मानिसलाई देख्नु भयो। केही यहूदीहरू येशूलाई दोष लगाउनलाई निहुँ खोजिरहेका थिए। अनि तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, के विश्रामको दिनमा कसैलाई निको पार्नु न्यायोचित छ?
11 उहाँले भन्नुभयो, यदि तिमीहरूमध्ये कसैको एउटा भेडा छ, त्यो विश्रामकोदिनमा एउटा खाल्डामा खस्यो भने के आफ्नो हातले समातेर बाहिर तान्दैनौ?
12 एउटा मानिस भेडा भन्दा धेरै असल हुन्छ। त्यसर्थ विश्रामको दिनमा भलो गर्न व्यवस्थाले दिन्छ।
13 तब उहाँले त्यस डुँडेहात भएको मानिसलाई भन्नुभयो, मलाई तिम्रो हात हेर्न देऊ। त्यसले येशू भएतिर हात पसार्‌यो। अनि उसको हात, त्यो अर्को हात जस्तै निको भयो।
3. मर्कूस 14: 16, 17, 22-25
16 यसकारण चेलाहरू गए अनि शहरमा पसे येशूले भन्नु भएको जस्तै तिनीहरूले सबै कुराहरू भेट्टाए। यसर्थ तिनीहरूले नै निस्तार चाडको भोज तयार गरे।
17 साँझमा, येशू आफ्ना बाह्रजना प्रेरितहरू लिएर त्यो घरमा जानुभयो।
22 जब उनीहरू खाँदै थिए, येशूले केही रोटी लिनुभयो अनि त्यसको निम्ति परमेश्वरलाई धन्वाद दिनुभयो। तब उहाँले त्यसलाई टुका टुका पार्नुभयो, अनि आफ्ना चेला हरूलाई दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यो लेऊ यो मेरो शरीर हो।
23 त्यसपछि यशूले कचौरा लिनुभयो अनि यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभयो। तब उहाँले त्यो आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभयो। तिनीहरूले कचौराबाट पिए।
24 त्यसपछि यष्ठ्वेशूले भन्नुभयो, यो नयाँ करारको मेरो रगत हो। या रगत धेरै मानिसहरूका निम्ति पोख्याएको हो।
25 म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। म यो दाखको रस फेरि त्यसबेलासम्म पिउँदिन जुनबेला सम्म म परमेश्वरको राज्यमा यसलाई नयाँ पिएको हुँदिनँ।
4. यूहन्ना 19: 17, 18 (से 1st,)
18 गलगथामा येशूलाई क्रूसमा टाँगे।
5. यूहन्ना 21 : 1-6, 9, 12, 15-17
2 केही चेलाहरू भेला भएका थिए। तिनीहरू शिमोन पत्रुस, थोमा दिदुमस भनिने, गालीलको कानाका नथानेल, जबदीका दुइ छोराहरू र अन्य दुइजना उहाँका अन्य चेलाहरू त्यहाँ थिए।
3 शिमोन पत्रुसले भन्यो, म माछा पक्रन जान्छु। अरू चेलाहरूले भने, हामी तिमीसितै जानेछौं। तब सबै चेलाहरू गए र डुङ्गामा चढे। त्यसरात तिनीहरूले केही पक्रन सकेनन्।
5 तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साथीहरू हो! तिमीहरूले कुनै माछा पक्रियौ?
6 येशूले भन्नुभयो, माछा मार्ने जाल फ्याँक तिमीहरूको डुङ्गाको दाहिनेपट्टि। तिमीहरू त्यहाँ केही माछाहरू पाउनेछौ। तिनीहरूले त्यसै गरे। तिनीहरूले यति धेरै माछाहरू पक्रे कि तिनीहरूले डुङ्गातर्फ जाल तान्न पनि सकेनन्।
12 येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आऊ अनि खाऊ। कुनै पनि चेलाहरूले उहाँलाई सोध्ने आँट गरेनन्, तपाईं को हुनुहुन्छ? तिनीहरूलाई उहाँ प्रभु नै हुनुहुन्छ भनेर थाहा थियो।
15 जब तिनीहरूले खाइसके, येशूले शिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो, योआनेसको पुत्र शिमोन, यी अन्य मानिसहरूले भन्दा ज्यादा तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? पत्रुसले जवाफमा भने, ज्यू प्रभु, तपाईं जान्नु हन्छ म प्रेम गर्छु तपाईंलाई। त्यसपछि येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो, मेरा भेंडाहरूलाई खुवाऊ।
16 फेरि पत्रुसलाई भन्नुभयो, शिमोन योआनेसको पुत्र, तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? पत्रुसले जवाफमा भने, ज्यू, प्रभु, तपाईं जान्नु हुन्छ म प्रेम गर्छु तपाईंलाई। त्यसपछि येशूले भन्नुभयो, मेरा भेंडाहरूकोहेरचाहा गर।
17 तस्रोपल्ट येशूले पत्रुसलाई सोध्नुभयो, शिमोन, योआनेसको पुत्र, तिमी मलाई प्रेम गर्छौ?”पत्रुस उदास भए, किनकि येशूले उसलाई तेस्रो पल्ट सोध्नुभयो, तिमी मलाई प्रेम गर्छौं? पत्रुसले भने, प्रभु तपाईं सब थोक जान्नुहुन्छ। मैले तपाईंलाई प्रेम गर्छु भनेर पनि जान्नुहुन्छ। येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो, मेरा भेंडाहरूलाई खुवाऊ।
6. यूहन्ना 14 : 15
15 यदि तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्यौ भने, तब तिमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गर्नेछौ।
7. मत्ती 10 : 8
नासरतका येशूले पितासँग मानव एकताको शिक्षा सिकाउनुभयो र प्रदर्शन गर्नुभयो र यसको लागि हामी उहाँप्रति असीमित श्रद्धाभाव राख्दछौं। उसको मिशन व्यक्तिगत र सामूहिक दुबै थियो। उनले जीवनको काम केवल आफैंलाई अन्याय मात्र गरेनन् तर मर्दप्रति दया पनि देखाए - तिनीहरूको काम कसरी गर्ने भनेर देखाउन, तर उनीहरूको लागि होइन वा तिनीहरूलाई एकल जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न पनि होइन।
येशूको इतिहासले नयाँ पात्रो बनायो, जसलाई हामी इसाई युग भन्छौं; तर उनले कुनै रीतिथितिवादी पूजा गर्न सकेन। उसलाई थाहा थियो कि मान्छेहरू बप्तिस्मा लिन, युखेरिस्टको भाग लिन, पादरीहरूलाई सहयोग गर्न, शबाथ पालन गर्न, लामो प्रार्थना गर्न, र अझै कामुक र पापी हुन सक्छन्।
येशू हाम्रो अशक्तता बोक्नुभयो; उनलाई नश्वर विश्वासको त्रुटि थाहा थियो, र "उसको धारिलो [त्रुटिलाई अस्वीकार गरेर] हामी निको भयौं।" “मानिसहरूबाट खतरनाक र अस्वीकृत”, श्रापका निम्ति आशिष्‌ फर्केर, उसले मानिसहरुसंगको उल्टो मानिसहरुलाई सिकायो, ऊ पनि परमेश्वरको स्वभाव नै। र जब त्रुटिले सत्यको शक्ति महसुस गर्‍यो, कोर्रा र क्रसले महान् शिक्षकको प्रतिक्षा गर्यो। यद्यपि, उसले ईश्वरीय आदेश पालन गर्ने र परमेश्वरमा भरोसा राख्ने, पापबाट पवित्रतासम्मको नयाँ मार्गलाई पछाडि पार्ने र हिंड्ने जोगाउने कुरालाई राम्ररी बुझेको थिएन।
येशूले प्रदर्शनद्वारा जीवनको मार्ग सिकाउनुभयो, ताकि यो ईश्वरीय सिद्धान्तले बिरामीहरूलाई निको पार्छ, त्रुटि हटाउँछ, र मृत्युमाथि विजयी हुन्छ भनेर हामी बुझ्दछौं। त्यसकारण उनको सल्लाहको शक्ति, "यदि तपाईं मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने, मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नुहोस्।"
चर्चमा वा यसबाट बाहिर भएका सबै कुरालाई सम्मान गर्ने क्रममा पेशा भन्दा ख्रीष्टको निम्ति समर्पण गर्नु प्रदर्शनको आधारमा बढी हो।
5. 31: 12-22 (तिर.)
इसाई कर्तव्यहरूको सूचीमा उनले आफ्ना अनुयायीहरूलाई सत्य र प्रेमको च ्गाइ गर्ने शक्ति सिकाए। उनले मृत समारोहहरूमा कुनै महत्त्व राखेनन्। यो जीवित ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, व्यावहारिक सत्य, जसले येशूलाई काममा उहाँलाई पछ्याउने सबैको लागि "पुनरुत्थान र जीवन" बनाउनुहुन्छ। हामीले उनको अनमोल आदेशहरूको पालना गर्दै - हामीले आफ्नो प्रदर्शन पछ्याए सम्म यो पक्राउ पछ्याउँदछौं - हामी उहाँको कचौराबाट पिउँछौं, त्यसको रोटी पियौं, हामी पवित्र छौं; र अन्तमा हामी उहाँसँगै बस्नेछौं, ईश्वरीय सिद्धान्तको पूर्ण ज्ञानमा, जसले मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्दछ।
हाम्रा मालिकका आज्ञाहरू पालन गर्न र उहाँको उदाहरण अनुसरण गर्न, उहाँप्रति हाम्रो उचित ण हो र उसले गरेका सबै कुराको लागि हाम्रो कृतज्ञताको एक मात्र योग्य प्रमाण हो। बाहिरी आराधना स्वयं वफादार र हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न पर्याप्त छैन किनकि उनले भनेका छन्: "यदि तिमी मलाई प्रेम गर्दछौ भने, मेरा आज्ञाहरू पालन गर।"
आजका इसाईहरूले त्यो क्यारियरको अधिक व्यावहारिक आयात लिन सकून्! यो सम्भव छ, - हो, यो प्रत्येक बच्चा, पुरुष, र महिलाको कर्तव्य र सुअवसर हो - सत्य र जीवनको प्रदर्शन द्वारा स्वास्थ्य र पवित्रताको प्रदर्शनबाट केही हदसम्म मास्टरको उदाहरण अनुसरण गर्नु। इसाईहरू उनका अनुयायीहरू भएको दाबी गर्दछन्, तर के उनीहरू उहाँको आज्ञा पालन गर्दछन्? यी अत्यावश्यक आज्ञाहरू सुन्नुहोस्: "यसकारण स्वर्गमा हुनुहुने तिम्रा पिता जस्तो सिद्ध होऊ, त्यस्तै तिमीहरू पनि सिद्ध होऊ!" "सारा संसारमा जानुहोस्, र सबै प्राणीहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस्!" "बिरामीलाई निको पार्नुहोस्!"
यदि कुनै रीतिथितिमा भाग लिनेहरू सबैले येशूको कष्टहरू सम्झन र त्यसको कचौराबाट पिएका भए, तिनीहरूले संसारलाई क्रान्तिमा पुर्‍याउने थिए। यदि भौतिक चिह्नहरूको माध्यमबाट उनको स्मारक खोज्ने सबैले क्रस लिनेछ, बिरामीहरूलाई निको पार्छ, खराबी हटाउनेछ, र गरिब, वा ग्रहणयोग्य चिन्ताको निम्ति, वा सत्यको प्रचार गर्दछ - तिनीहरू सहस्राब्दीमा ल्याउनेछन्।
हाम्रो बप्तिस्मा सबै त्रुटिबाट एक शुद्धीकरण हो। हाम्रो चर्च ईश्वरीय सिद्धान्त, प्रेम मा निर्मित छ। हामी यस चर्चसँग एकतामा रहन सक्दछौं जुन हामी आत्माको नवजात शिशु हुनुहुन्छ, जब हामी जीवनमा पुग्छौं जुन सत्य हो र सत्य जीवन हो जुन प्रेमको फलहरू ल्याएर हुन्छ - त्रुटि बाहिर निकाल्दै बिरामीहरूलाई निको पार्छ। हाम्रो एक परमेश्वर संग आध्यात्मिक कुराकानी छ। हाम्रो रोटी, "जुन स्वर्गबाट आउँदछ," सत्य हो। हाम्रो कप क्रस हो। हाम्रो वाइन प्रेमको प्रेरणा, हाम्रो मास्टर ड्राफ्टले पिए र आफ्ना अनुयायीहरूको प्रशंसा गरे।
ईश्वरीय मानव को हर बिन्दु मा विजय प्राप्त गर्नु पर्छ। येशूले सिकाउनुभएको विज्ञान र जीवनले जीवन, पदार्थ र बुद्धिको बारेमा सबै भौतिक विश्वासहरू, र त्यस्तो विश्वासबाट बढ्दै गरेको बहु-गल्ती त्रुटिहरूमा विजय हासिल गर्नुपर्दछ।
प्रेम घृणा मा विजय हुनु पर्छ। सत्य र जीवनले त्रुटि र मृत्युमाथि विजयको छाप लगाउनुपर्दछ, काँडाको मुकुटको लागि छुट्याउनु अघि, शान्तिको अनुसरण गर्नुहोस्, "राम्रो, असल र विश्वासी नोकर" र आत्माको सर्वोच्चता प्रदर्शन हुन्छ।
को आफ्नो शिक्षा र उदाहरण पछ्याउन तयार छ? सबैले ढिलो होस् वा चाँडै आफूलाई ख्रीष्टमा राख्नुपर्दछ, परमेश्वरको सत्य धारणा। कि उसले उदारतापूर्वक आफ्नो प्यारो किनिएको खजाना खाली वा पापले भरिएको मानव भण्डारहरूमा खन्याउन सकून् भन्ने कुरा येशूको तीव्र बलिदानको प्रेरणा थियो। ईश्वरीय आज्ञाको साक्षीको रूपमा उनले जीवन, सत्यता र प्रेमले बिरामी र पापीहरूलाई निको पार्छ र मृत्युबाट मृत्युलाई जितेर केही फरक पार्दैन भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गरे। यो ईश्वरीय प्रेमको प्रस्ताव राख्न सक्ने यो सब भन्दा उच्च प्रमाण हो।
सत्यको अमर विचार शताब्दीयौंदेखि व्यापक रूपमा फैलँदैछ, यसको पखेटामुनि बिरामी र पापीहरू जम्मा गर्दै। मेरो थकित आशाले त्यो खुशीको दिनलाई बुझ्ने कोशिस गर्दछ, जब व्यक्तिले ख्रीष्टको विज्ञानलाई चिन्नेछ र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्दछ - जब उसले परमेश्वरको सर्वशक्तिमानता र ईश्वरीय प्रेमको च गाइ गर्ने शक्तिलाई थाहा पाउनेछ जुन उसले गरेको छ र मानिसजातिको लागि गरिरहेको छ। । प्रतिज्ञाहरू पूरा हुनेछन्। ईश्वरीय उपचार को पुन: देखा को लागी समय सँधै समय हो; र जसले आफ्नो पार्थिव सबै ईश्वरीय विज्ञानको बेदीमा राख्छ, उसले अब ख्रीष्टको कचौराबाट पिउँछ, र इसाई उपचारको आत्मा र शक्तिले पोषित छ।